TETO AN-DRENIVOHITRA : Miisa 06 ny maty hita nitsirara teny an-dalana nandritra ny volana marsa
Ny volana marsa 2020, miisa enina ireo olona namoy ny ainy teto an-drenivohitra, hita nitsipaka tampoka, nitsirara teny an-dalana. Io no tatitra avy eo anivon’ny Bmh, ny faran’ny herinandro lasa teo. 6 avril 2020
Araka ny fanazavana voaray bebe kokoa, nandritra ny fotoana fihibohana, fepetra sy toromarika napetraky ny fitondram-panjakana nanomboka ny 23 marsa lasa teo manoloana ny valanaretina “coronavirus” no nahitana ireo tranga ireo. Teny Ankazomanga, Tsiazotafo, Andravoahangy, 67ha ireo no toerana nahitana ireo olona nianjera saingy voamarina teo anivon’ny tobim-pahasalamana avokoa fa tsy ny aretina “coronavirus“ akory no nahavoa azy ireo ka nahafaty azy.
Aretina mitaiza, tsy fahampian-tsakafo io no antony izay niafara hatramin’ny fahafatesana mihitsy. Tsikaritra mantsy fa vao nisy ireo tranga ireo teto an-drenivohitra dia maro no natahotra. Nandeha ny tsaho rehetra fa efa mihanaka be sy miparitaka eto Antananarivo ity areti-mandoza mihatra amin’izao tontolo izao ity. Hany ka dia tsy nisy sahy nandray andraikitra tandrify azy namonjy ny ain’ireo olona narary ireo ny ankabeazan’ny fiarahamonina sy ny manodidina. Nanamafy hatrany ny mpitsabo fa ny hanoanana no anisany nampitarika ny fihombon’ny aretina tamin’ireo olona ireo.
Na izany aza anefa dia tsy tokony hatao ambanin-javatra ny toromarika napetraky ny fitondram-panjakana eo anatrehan’ny ady iombonana amin’ny aretina coronavirus fa hampihatra izany avokoa ny tsirairay. Raha sendra ihany koa mahita trangan-javatra mampiahiahy momba ity aretina ity eny anivon’ny fiarahamonina dia afaka miantso avy hatrany ny laharana miandraikitra izany toy ny 910- 913- 914. Ho an’ireo aretina tsotra hafa ihany koa dia manamafy anefa ireo mpitsabo eny amin’ny toeram-pitsaboana hafa toy ny eny amin’ny Hjra fa misokatra ary mandray marary izy ireo amin’izao vanim-potoana misy antsika izao.